တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားရဲ့ ဒဿနစာစုများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားရဲ့ ဒဿနစာစုများ
တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားရဲ့ ဒဿနစာစုများ
Posted by ကိုပါကြီး on Feb 10, 2012 in Buddhism, Copy/Paste |4comments
ဆရာတော် ဦးဥာဏိဿ နှင့် ဒလိုင်းလားမား (ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရ)
ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စမန်တူးတူး (ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရ)
အိုဘားမား (အမေရကန်သမ္မတ) (ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရ)
တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားကို ဘာကြောင့် ကမ္ဘာလူသားတွေက လေးစားနေကြသလဲ. သူကိုလေးစားတယ်ဆိုတာက ခရစ်ယာန် ဟိန္ဒူ မွတ်စလင် ဘာသာမဲ့ သူအကြောင်းကို တက်သိနားလယ်သူ အများစုက လေးစားကြပါတယ်။
သူဘာကြောင့် ဒီလို ချစ်ခင်လေးစားခြင်းကို ခံနေရသလဲ။ သူဟာ ဘုရားစကားကို နားထောင်တယ်။ မေတ္တာတရားကို အခြေခံတယ်။
ဘာသာရေး အစွန်းမရောက်ဘူး။ ဒါတွေဟာ ဒလိုင်းလားမားရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေပေါ့.။
မြန်မာနိုင်ငံက ဘာသာရေး ထေရဝါဒ အစွန်းရောက်များ ၊တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားရဲ့ ဒဿနတွေကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ဒီလို ဒလိုင်းလားမားလို့ ဘုန်းကြီးတွေရှိနေလို့ ကမ္ဘှာ့ဗုဒ်ဓဘာသာဆိုပြီး သိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒလိုင်းလားမားတို့ရဲ့ ကြို့းပန်းအားထုတ်မှု့ကြောင့် ကမ္ဘာက သိနေတဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာကို တို့မြန်မာနိုင်ငံက ထေရဝါဒကြောင့်ဆိုပြီး ရမ်းမဖြီးပါနဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံက ထေရဝါဒ အမည်ခံ ရဟန်းတွေထဲမှာ ဝါဒမတူရင် ထောင်ချမယ်၊ ကျောင်းကို ချိပ်ပိတ်မယ်ဆိုပြီး ဖျက်ဆီးရေး ကြွေးကြော်သံတွေ ဆူညံပွက်ကလောရိုက်နေပါတယ်။
ဒီလောက်မေတ္တာတရားခေါင်းပါးတဲ့ ရဟန်းတွေကို ကမ္ဘာလူထုကြီးက အသိအမှတ်မပြုပါဘူး။
လူသားအားလုံးက အသိမှတ်ပြုချင်ရင် စိတ်ဓာတ်လေးတွေကို အရင်ဆုံးပြုပြင်ကြပါ။ ဒလိုင်းလားမား ဘာကြောင့် လူတွေလေးစားနေကြတာလည်း ဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်ကြ၊ အစွန်းရောက် ထေရဝါဒရဟန်းများ၊ ဝါဒရေးရာကို ဝါဒရေးရာနဲ့ မဖြေရှင်းပဲ။ ထောင်ချဖြေရှင်းနေတဲ့ အစွမ်းရောက် ဝါဒကို ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဒလိုင်းလားမားလို ကမ္ဘာကျော်ချင်ရင် ဒလိုင်းလားမားလို မေတ္တာထားနိုင်အောင် ကျင့်လိုက်ပါလို့ ပြောလိုက်ပါရစေဗျာ။
(အသောက အသောက အသောက ၏ facebook စာမျက်နှာမှ ဖြစ်ပါသည်။)
အေးဗျာ၊ မြန်မာ အစွန်းရောက်တယူသန် ထေရ၀ါဒီတချို့ အတုယူဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ။
ဒီနေ့ခေတ်လူတွေက အသိအမြင်တွေကျယ်လာကြပြီဗျ။ အရင်လို ပြောတိုင်း စွတ်ယုံတော့တာမဟုတ်ဘူး။
ကမ္ဘာမှာ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာစရာတွေက များလာပြီ။
ထေရ၀ါဒီတွေ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ကိုယ့်အရည်အသွေး ကိုယ်မြှင့်ဖို့တော့ လိုပြီနဲ့တူတယ်။
(တတ်နိုင်ရင် တစ်ပါးသူတွေကို ကူညီပါ။ မကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင် အနည်းဆုံး ဒုက္ခမပေးပါနဲ့။)
“တိဘက်က ဘုန်းတော်ကြီးလား” ဆိုတာ.. Related posts: မှာပေါ်နေတယ်..
အဲဒါကို ဆက်ဖတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်..။
(We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection.
ဘာသာတရား မရှိလည်း ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား မရှိလည်း ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ လူသားဆန်တဲ့ ခံစားချက် မရှိရင်တော့ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။) ဆိုတာလေးကို ဖတ်ရတော့ . . . . . . .
လူသားဆန်တဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်ဖို့ကတော့ တကယ့်လူပီသတဲ့လူတွေ ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
တကယ့်လူပီသတဲ့လူတွေ ဖြစ်ဖို့ကတော့ လူသားတွေဆောင်ထိုက်တဲ့ အသိပညာတွေနဲ့ ရပ်တည် ရှင်သန်နေမှသာ ဖြစ်မှာပါ။